Semalt: Uninzi lwexesha Ukufuna De Mot-Clé Restera Pertinente Dans Le SEO
Ukufuna amagama amaqhosha, okuyi-important part of any campagne de réferencement, ekhona emva kweminyaka emininzi. Kodwa, kwi-cours ye-last-years, la i-sur les mots clés i-number e-number de change. Ngamanye amaxesha, ezi tshintsho ziyi-cruciaux, ngamanye amaxesha angabalulekanga. Kule mibini, i-nature enokuzenzekelayo yinkqubo ibuyisela umbuzo ngokubhekiselele kwi-recherche nge-key clés pour le référencement.
uJack Miller, umphathi we-réussite client Semalt , hlalutya izixhobo ezichaza ngoku kwaye zidibanisa ukubaluleka kwe-recherche par mots clés.
Lezi zihloko zihlala zibalulekile kwi-referenti ngenxa yokuba zidlala indima ebalulekileyo kwindawo yakho yokuncedisa ukuba ibe yi-classé ngokusebenzisa iifomtes de search. I-recherche nge-mots-clés ikuvumela ukuba ufumane ama-keywords enikezelayo:
I-Trafic elevé - online logo design tool. Uthobela izivakalisi ezintsha ngenxa yokuba i-site yakho ibhalwa kwiziphumo zophando.
Ukufaneleka. Bonke abafakeli be-intanethi baxhomekeke kule nkcazo kunye nokunyaniseka kwabangenayo.
Ukungqinelana okungekho. Ukuba unayo i-key-clés, le nto ibonisa ukuba ungekho ukufaka ii-heures ezongezelelweyo.
Kwiziko lokuqala ze-search ngegama le-clé, u-optimisation ufune ukuba usebenzise i-farcir kwi-content yakho kwi-akhawunti yakho yonke. I-Google ne-Google Analytics, i-Google, ichaza ulwazi oluninzi kwi-Web et la recherche des mots clés sur votre site Web..Une fois que vous ufumene le list of mots clé à trafic élevé et à faible concurrence, uyakwazi ukulungiselela indawo yakho ngqo ukuba uthele ezi zicelo. Iimfuno ezininzi ze-Google zidibene ne-univoque, oku kuthetha ukuba baya kuthatha ibinzana okanye i-mot et chercheront des correspondances eduze okanye ezinye iinguqu kunye nezinye i-Web.
Ngo-2013, i-Google ipapashwe ngesiqulatho se-Hummingbird, esiyi-introduc le concept ye-«search semantique». Le up-to-date is changed the way in which the moteur of inquiry traitates the queries entrants. Xa ufuna i-intanethi elula ukuyifumana loo msebenzisi ufuna, le-imeyli i-permis ku-Google iqondise i-intentions emva kwesicelo somsebenzisi. I-Sur la value nominale, loo nto ibonakala ibe yinguqulelo yam minye, kodwa i-eu eu unempembelelo eninzi kwi-mode i-optimizers de de recherche les mots-clés.
Le nguqulo ishintshwe i-SEO kungekhona nje ngokubhekiselele kumagama amabinzana kunye neegama zamagama. Kwamhlanje, kunokwenzeka ukuba i-classer des mots et des phrases semantiquement liés, que vous neavez pas ngokuthe ngqo, kodwa unokufunda i-classer des mots et des phrases qui ne sont pas pas sur votre page. Ezi ntetho ziyaziwa phantsi kwegama la magama kwiimpawu zamagama kwi-queue longueue. Ils ont été popularisés par Hummingbird et ont fait du marketing des expressions rares et moins compétitives. Cela ibonisa ukuba endaweni ye-simplement placer des mots clés, i-firms kufuneka ukuba i-content creator du contenu autour d'un mot clé ou d'une phrase tout en se concentrant sur le sujet général.
Iimiqathango zeGoogle kwi-key clés ziye zaqala nge-Google Analytics kwaye ziye zaqhubeka zi-AdWords. Cela ukukhuthaza abantu ukuba basebenzise yabo i-publicité payée et à la repprimer emva kokufumana iminyango. En fact, il devenir ngezinye idibene kunye neempembelelo ezichaphazelekayo kwizentengiso ezithengiswayo zokuqulunqa izicwangciso zokusebenzisana kwama-keywords.
kunye nazo zonke iziganeko ezikhankanywe apha, sifanele siqonde ukuba i-teknoloji enokungena kwi-game, umzekelo, njengokuba usebenze nge-assistants numériques njengeCortana ne-Siri. Ukhuthaza abantu ukuba bafune ukuthetha ngeengxoxo, oku kutshintsha ngokupheleleyo le game. I-reality augmentée, iingubo kunye ne-virtual reality ziya kutshintsha nendlela abantu abaqhuba ngayo uphando kunye nendlela yokusebenza yokusebenza. Uninzi lweenguqu ezininzi ezifunekayo, i-recherche par mots clés ne-si-le-même, kodwa ngeke ilahleke. Cela va ube uguquko oluqhubekayo kwi-un nouveau system of research.